Nri Laxative: mee ngosiputa gi nke oma Nutri Nri
Michael Serrano | | Alimentos, Nri
Enwere ọtụtụ nri laxative na mkpụrụ osisi na akwukwo nri nke ụlọ ahịa gị. Ebe ọ bụ na ha nwere ike dị oke irè na igbochi ma ọ bụ na-emeso afọ ntachi, Obi abụọ adịghị ya na ọ bara uru ịmata ihe ha bụ.
Ngwongwo ndi mmadu Ha ga - enye gi mmamiri na nsụgharị eriri afọ gị n'otu oge ahụ ha na - enye gị vitamin na mineral dị mkpa maka ọrụ ndị ọzọ na-eme n’ahụ gị.
1 Gini mere iji gha eme ihe?
2 Infusions na laxative utịp
3 Fiber na-enweta eriri zuru ezu?
4 Nri Laxative maka nri gị
5 Lifestylezọ ndụ gị ọ bụ ihe kpatara afọ ntachi?
Gini mere iji gha eme ihe?
Ọgwụ ndị na-agwọ ọrịa na-enye ihe ngwọta dị ngwa ma dị irè maka afọ ntachi. Agbanyeghị, ọ bụghị ihe amamihe dị na iji ha oge niile n'ihi na ahụ nwere ike ime ka ịghara ịmegharị eriri afọ n'onwe ya. Na nchịkọta, ọgwụ laxative nwere ike ịmepụta ndabere.
Nhọrọ nke ọzọ bụ nri laxative, nke na - enyekwara eriri afọ aka ịga ngwa ngwa. Ọ ka mma na mwepụ na-apụta n'ụzọ nkịtị na ahụike site n'enyemaka nke nri. N'ihi ya, buru ụzọ nwaa laxatives eke sitere n'okike.
Infusions na laxative utịp
Lelee isiokwu ahụ: Laxative infusions. Ọ bụrụ na ị na-enwe mmasị na ahịhịa na ọgwụgwọ nkịtị, ebe ahụ ị ga-ahụ ọtụtụ ihe eji arụ ọrụ laxative.
Fiber na-enweta eriri zuru ezu?
Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu afọ ntachi, nke a bụ ajụjụ mbụ ị ga-ajụ onwe gị. Fiber na-enweghị nri so n’ihe na-ebute afọ ntachi.
Ọnụ ọgụgụ a na-atụ aro kwa ụbọchị bụ eriri 25, ọ bụ ezie na ọnụ ọgụgụ ahụ nwere ike ịdị iche na-adabere na okike ma ọ bụ afọ. Otu ụzọ dị mma iji nwetakwu bụ ịkụ nzọ na ọka niile na ngwaahịa ndị ahụ na-egosi ọnụọgụ dị elu na akara ha. Agbanyeghị, ịnwere ike ịchọta eriri n'ọtụtụ nri a na-amụ site na ala. Ndị na-esonụ bụ ụfọdụ n'ime akwụkwọ nri fiber kachasị elu. Cheta inweta eriri gị site n'ọtụtụ nri dị ka o kwere mee kama ịmachi naanị otu:
Peas na-acha akwụkwọ ndụ
Ube (ya na akpụkpọ)
Nduku (na akpụkpọ)
Apple (na akpụkpọ)
Osikapa agba aja aja
Ekwesiri ighota na uru nke eriri abughi na mgbaze. A na-ewere ya na Ihe a na-arụkwa ọrụ dị mkpa n'ịchịkwa shuga shuga na ọkwa cholesterol., nakwa mgbe ị na-ebelata ohere nke ibute ọrịa obi.
Nri Laxative maka nri gị
Peoplefọdụ ndị nwere ya ọtụtụ oge karịa ndị ọzọ, mana n'ozuzu, ọ nweghị onye na-anọghị na afọ ntachi. N'ụzọ nke a, ị nwere ike ịnwalela ụfọdụ nri ndị a:
Ejiri ọtụtụ mmiri (anaghị ewere H2O zuru ezu nwere ike ime ka afọ ntachi ka njọ), a na-atụkarị mkpụrụ a na ikpe nke afọ ntachi n'ihi mmetụta dị laxative dị nro. Nke a bụ n'ihi ya sorbitol na eriri ọdịnaya, ihe ndị na-eme ka eriri afọ dịkwuo mma. Ma ọ dị ọhụrụ, nke akpọnwụla ma ọ bụ n'ụdị jam, piom abụghị otu n'ime usoro ọgwụgwọ afọ ntachi obi kachasị ewu ewu. Ọ dị ezigbo irè.
Ọ bụ ezie na ọ na-apụ apụ dị ka laxative sitere n'okike, ọ dị mma ịmara na a na-akpọ piom na ihe ndị ọzọ na-atọ ụtọ. Nnyocha na-egosi ya dị ka antioxidant, antiseptik na satiating mkpụrụ (ọ dị mma maka ọnwụ ọnwụ ma ọ bụrụ na erichaa ya n'ike).
Mkpụrụ fig na-atọ ụtọ bụ nri ọzọ nwere mmetụta dị nro dị nro. Ihe nzuzo dị na njikọta nke eriri na magnesium ọ na-enye. Na mgbakwunye na igbochi na ịlụ ọgụ ntachi, fig na-enyekwa ezigbo ogwu nke ike. N'ụzọ dị otú a, gụnyere ya na nri gị nwere ike ịbụ ezigbo echiche n'oge oge nnukwu mkpa anụ ahụ ma ọ bụ ọgụgụ isi. A na-ahụta ha dị ka ihe na-atọ ụtọ maka ndị nwere kọlesterol dị elu ma ọ bụ ọbara mgbali elu.
Ihe kachasị mma iji nọgide na-enwe ezigbo eriri afọ bụ Jide n'aka na ị na-eri nri na-egbu egbu mgbe niile na nri gị kama ị na-eri ha naanị mgbe enwere nsogbu.
Lifestylezọ ndụ gị ọ bụ ihe kpatara afọ ntachi?
Laxative oriri ndị kasị dị irè mgbe jikọtara na a ike ndụ. Mgbanwe ndị a nwere ike inyere gị aka ịpụpụ nke ọma, ọbụlagodi na-enweghị mkpa iji ụdị laxative ọ bụla.
Ọ bụrụ n’ị nọ n’oké nrụgide, nri nwere ike iji nwayọ nwayọ na-esite n’akpa gị. N'okwu a, usoro ntụrụndụ ha ga - enyere gị aka idozi nsogbu ahụ. N'akụkụ aka nke ọzọ, Enweghị mmega ahụ na-enwekwa mmetụta na-adịghị mma na njem eriri afọ. Ya mere zere ịnọ otu ebe ma na-emega ahụ mgbe niile ma ọ bụrụ na i mebeghị ya. Na-egbochi afọ ntachi bụ otu n'ime ọtụtụ ihe kpatara ịmalite ọzụzụ.
Ekwesiri ighota na ọrịa ụfọdụ nwekwara ike ịkpata afọ ntachi, nke bụ ya mere na mgbe ọ na-adịgide adịgide (na-adịgide ruo ọtụtụ izu) ma ọ bụ bịa soro mgbaàmà ndị ọzọ (gụnyere ọnwụ ọnwụ), ị ga-agakwuru dọkịta ka o lee gị anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nutri Nri » Nri » Ihe oriri na-edozi ume